Maamulkaha xaruntan, Bashiir Cabdi Xaaji Cumar ayaa sheegay in xarunta laga qaatay 2,800 oo dollarka Mareykanka ah, isagoo sheegay in shaqaalihii xaruntaas ay kooxaha hubeysani handadeen.
"Dableydu waxay si caadi ah ku galeen xarunta shirkadda, daqiiqado kaddibna waxay billlaabeen in macaamiishii lacagaha qaadanayay ay wajiga darbiga u saaraan, sidoo kalena ay handadaan shaqaalaha, ugu dambeynna ay qaataan 2,800 oo doollar," ayuu yiri Bsahiir Cabdi oo sheegay inay wargeliyeen booliiska.
Sidoo kale, maamulaha xarunta la dhacay ayaa sheegay in kooxaha hubeysan ay wateen gaari Land Cruiser ah ay si nabadgalyo ah goobta uga tageen, isagoo xusay inaysan garanayn in raggaas ay ciidan ahaayeen iyo in kale.
Taliyaha booliiska degmada Waaberi oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxda dhaca geysatay loo sheegay inay ka koobnaayeen afar nin oo laba ka mid ah ay ku labisnaayeen tuute ayna u carareen dhinaca isgoyska KM-4, ayna wadaan baaris ay ku raadinayaan.
Shirkaddan xawaaladeed ayaa noqonaysa tii labaad oo lagu dhaco Muqdisho inta lagu jiro bishan Juun, iyadoo la xusuusto in xarunta shirkadda Jubba Express ay laba toddobaad ka hor dhaceen kooxo hubeysan oo dharka ciidamada ku labisan, iyagoo ka qaatay lacag gaaraysa 29,000 oo doollar.